Somalia:Qaadka oo laga mamnuucday degmada Xudur [Sabab]
Home Somali News South and Central Somalia:Qaadka oo laga mamnuucday degmada Xudur
Gudoomiyaha Gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool, ayaa sheegay amarkaan inuu ka soo baxay Maamulka Gobolka illaa amar dambana hakad la galiyay qaadkii Diyaaradaha lagu gayn jiray Degmada Xudur.
Wuxuu ku sheegay sababta inay doonayaan in ciidamada ay noqdaan kuwa hagaagsan oo isku diyaariya qaadista hawlgalo ka dhan ah Ururka Al Shabaab, sidaasi awgeedna lama huraan ay noqotay in qaadka laga joojiyo guud ahaan Degmada Xudur.
“Si loo hawlgaliyo ciidamada, maanta laga bilaabo wax jaad ah kama soo dagi karaan Magaalada Xudur, mar labaad ayaan ku celinayaa dadka Diyaaradaha wakiilka ka ah, qaad ma keeni karaan, Diyaaradii keenta qaad, kama kici karto Magaalada Xudur.” Ayuu yiri Gudoomiyaha Gobolka Bakool.
Maxamed Cabdi Tool, ayaa sheegay Diyaaradii ku xadgudubta amarkaasi in laga qaadi doona ganaax dhan laba kun oo Doolar, maadaama amarka soo baxay uu yahay mid maamul oo loo baahan yahay in la dhaqangeliyo.
Ciidamada Dowladda ayaa intooda badan waxa ay u badan yihiin kuwa isticmaala Maandooriyaha qaadka, waana sababta keentay in ciidanka ay sameyn waayeen horay u socod ku aadan dagaalada lagula jiro Al Shabaab.
DHAGEYSO: Galmudug oo Dhagaha ka fureysatay Hadalkii Dowladda
Mohamed - September 18, 2018
Madaxda Maamulka Galmudug ayaa muuqda in aysan u hoggaansamin Baaqii shalay...
DHAGEYSO: Mahdi Guuleed oo Jawaab siiyay Maamul Goboleedyada
Muxuu u Baaqday Shirkuu ku baaqay Madaxweyne Farmaajo